China LVP mandeha ho azy fanaraha-maso maivana (tavoahangy PP) mpanamboatra sy mpamatsy | IVEN
Masinina fanaraha-maso Auto Light
Masinina fanaraha-maso maivana LVP Fampidirana:
Ny tobim-panaraha-maso dia azo alamina arakaraka ny filan'ny mpanjifa tena izy, ary ny fanaraha-maso kendrena dia azo alamina ho an'ny orinasa vahiny maro ao amin'ny vahaolana, ny haavon'ny famenoana, ny fisehoany ary ny famehezana sns.
Mandritra ny fizahana ranoka anatiny, ny vokatra nozahana dia vaky mandra-pahatongan'ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha, ary ny fakantsary fakan-tsary dia maka sary hatrany hatrany hahazoana sary marobe, izay novolavolain'ny algorithm fizahana maso novolavolaina tsy miankina mba hitsara raha mahafeno fepetra ny vokatra voadinika. .
Fanilihana ho azy ireo vokatra tsy mendrika. Ny fizotran'ny fizahana rehetra dia azo zahana, ary ny angona dia voatahiry ho azy.
Ny milina fanaraha-maso mandeha ho azy dia afaka manampy ny mpanjifa mampihena ny vidin'ny asa, mampihena ny tahan'ny lesoka amin'ny jiro ary miantoka ny fiarovana ny fanafody amin'ny marary.
Milina fizahana jiro mandeha ho azy LVP Feature:
1.Atao fenoina ny fisarahana mitovy amin'ny tavoahangy ary esory ho azy ireo vokatra simba araka ny valin'ny fitsapana.
2.It dia afaka mihodina ny tavoahangy mba hojerena amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, izay mahatonga ny fihetsiky ny loto maloto ary manamora ny fizahana.
3.Ny fitsipika mifehy ny sary dia ampiasaina hamantarana ary marina kokoa ny mitsara ny raharaham-bahiny hita maso.
4.PLC HMI asa, tontonana fanaraha-maso LCD karazana.
5. Izy io dia afaka mamantatra ny lesoka amin'ny peratra, teboka mainty ambany ary satrony tavoahangy.
6.Ny famolavolana rafitra tsy misy rano dia raisina amin'ny ampahany, izay mety amin'ny fanadiovana tavoahangy tapaka. Ny faritra tavoahangy vaky dia azo hosasana mivantana amin'ny rano.
Masinina fanaraha-maso maivana LVP tombony:
1.Adopt ny rafitra servo drive feno mba hahatsapany fandidiana haingam-pandeha sy maharitra ary marina ary hanatsara ny kalitaon'ny fahazoana sary.
2.Ny fanaraha-maso servo mandeha ho azy dia manitsy ny haavon'ny takelaka mihodina mba hanamorana ny fanoloana tavoahangy samihafa amin'ny famaritana samihafa, ary mety ny fanoloana ny faritra voatondro. 8
3. Izy io dia afaka mamantatra ny lesoka amin'ny peratra, teboka mainty ambany ary satrony tavoahangy.
4.Ny lozisialy dia manana asan'ny tahiry feno, mitantana ny raikipohy fitsapana, mitahiry (afaka manonta) valin'ny fitsapana, manao fitsapana KNAPP, ary mahatsapa ny fifandraisana eo amin'ny masinin'olombelona.
5.Ny lozisialy dia manana asa fandinihana ivelan'ny Internet, izay afaka mamerina ny fizotran-kevitra sy ny fizahana fandinihana.
Masinina teknika fanaraha-maso maivana LVP:
Tavoahangy plastika 50-1000ml / tavoahangy PP malefaka
Fibre, volo, bloc fotsy ary zavatra tsy mety simba hafa, miboiboika, teboka mainty ary lesoka hafa amin'ny endrika ivelany
Fanjifana rivotra voahidy
LVP mandeha ho azy ny fizotran'ny masinina fanaraha-maso:
Previous: 30ml tavoahangin-tavoahangy vita amin'ny vera sy milina fametahana rongony
Manaraka: Milina fanangonana fanjaitra ra